Fanavotana - D. Todd Christofferson
Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson
Arakaraka ny hanarahantsika an’i Kristy no mahatonga antsika handray anjara sy hitondra fanampiana ao amin’ny asa fanavotana ataony.
Nisy fitadiavana mpiasa be dia be tokoa tany Amerika tamin’ny andron’ny fanjanahana. Nandritra ny taonjato faha 18 sy tany am-piandohan’ny taonjato faha 19 dia nisy ny fakana mpiasa vonona ny hifindra monina avy any Angletera, Alemana sy avy any amin’ireo firenena Eorôpeana hafa, saingy maro tamin’ireo naniry ny handeha no tsy nanam-bola handoavana ny saran’ny dia. Ny mitranga matetika ho azy ireo dia ny fanaovana ilay dia miaraka amin’ny fifanarahana fa mampanantena ny hiasa mandritra ny fotoana voafetra nefa tsy mandray karama izy ireo rehefa tonga mba handoavana ilay dian’izy ireo. Ny hafa dia tonga miaraka amin’ny fampanantenana fa hisy fianakaviana izay efa mipetraka any Amerika handoa ny saran’ny dia rehefa tonga izy ireo, saingy raha tsy mitranga izany, dia voatery tsy maintsy aloan’ireo olona vao tonga ny saran’izany amin’ny alalan’ny fanaovana asa tsy handraisan-karama. Ny voambolana hamaritana ireo mpifindra monina miasa tsy mandray karama ireo dia hoe “mpanavotra.” Tsy maintsy manefa ny saran’ny dia nataony izy ireo, na hoe mividy ny fahafahany amin’ny alalan’ny asa ataony.1
Tao anatin’ireo anarana faran’izay manan-danja niantsoana an’i Jesoa Kristy ny hoe Mpanavotra. Araka ny voalaza ao amin’ilay tantara fohy nolazaiko mikasika ireo mpifindra monina “mpanavotra,” ny teny hoe manavotra dia midika hoe manefa adidy iray na mandoa trosa. Ny hoe manavotra koa dia mety midika hoe mamonjy na manafaka, ohatra hoe amin’ny alalan’ny fandoavana onitra. Raha toa misy olona nanao fahadisoana ka manitsy na manonitra izany dia lazaintsika fa nanavotra ny tenany izy. Ireo dikany tsirairay ireo dia maneho ny lafin-javatra samihafa tao anatin’ilay Famonjena lehibe notanterahan’i Jesoa Kristy tamin’ny alalan’ny Sorompanavotany, izay ahitana araka ny teny ao anatin’ny rakibolana ny hoe: “manavotra amin’ny fahotana sy ny sazy avy amin’izany, amin’ny alalan’ny fanaovana sorona ho an’ilay mpanota.”2
Misy lafiny roa ny Fanavotan’ny Mpamonjy. Voalohany, manonitra ny fandikan-dalàn’i Adama izany sy ny vokatry ny Fahalavoan’ny olona amin’ny alalan’ny fandresena ilay azo antsoina hoe ny vokatra mivantana nateraky ny Fahalavoana—fahafatesan’ny vatana sy fahafatesana ara-panahy. Takatra tsara ny fahatesan’ny vatana; ny fahafatesana ara-panahy dia ny fisarahan’ny olona amin’Andriamanitra. Hoy ny tenin’i Paoly hoe: “Fa tahaka ny ahafatesan’ny olona rehetra ao amin’i Adama no ahaveloman’ny olona rehetra kosa ao amin’i Kristy” (1 Korintiana 15:22). Izany fanavotana amin’ny fahafatesan’ny vatana sy ny fahafatesana ara-panahy izany dia samy ho an’ny olona rehetra ary tsy misy fepetra.3
Ny lafiny faharoa ao amin’ny Sorompanavotan’ny Mpamonjy dia ny fanavotana amin’ny azo lazaina hoe vokatra ankolaka nateraky ny Fahalavoana—ny fahotantsika manokana fa tsy ny fandikan-dalàn’i Adama. Nateraka tao anatin’ny tontolon’ny fiainana an-tany isika noho ny Fahalavoana, ka ny fahotana—izay fandikàna ny lalàna masina napetraka dia—mibahan-toerana ao. Hoy ny Tompo raha niresaka momba antsika:
“Dia torontoronina ao am-pony toy izany koa ny fahotana rehefa manomboka mitombo izy, ary dia andramany ny mangidy mba hahaizany mankamamy ny tsara.
“Ary omena azy ny hanavaka ny tsara amin’ny ratsy; koa manao araka izay safidiny izy” (Mosesy 6:55–56).
Noho isika tompon’andraikitra ary manao ny safidy dia misy fepetra ny fanavotana antsika amin’ny fahotantsika—miankina amin’ny fibabohantsika sy ny fanalavirantsika ny fahotana izany ary fananana fiainana feno fahamasinana, na amin’ny teny hafa dia miankina amin’ny fibebahana izany (jereo ny F&F 58:43). “Koa,” hoy ny Tompo nandidy, “ampianaro ny zanakao izao fa ny olona rehetra, na aiza na aiza, dia tsy maintsy mibebaka, fa raha tsy izany dia tsy afaka mandova mihitsy ny fanjakan’Andriamanitra izy, fa tsy misy zavatra tsy madio afaka mitoetra ao na mitoetra eo anatrehany” (Mosesy 6:57).
Manavotra antsika amin’ny fahotana ny fijalian’ny Mpamonjy tao Getsemane sy ny fialany aina teo amin’ny hazo fijaliana amin’ny alalan’ny fanefana ny fitakian’ny fahamarinana amintsika. Maneho famindram-po sy mamela heloka ireo izay mibebaka Izy. Ny Sorompanavotana koa dia manefa ny trosa ananantsika amin’ny fahamarinana amin’ny alalan’ny fanasitranana sy ny fanarenana antsika tamin’izay fijaliana nozakaintsika tamim-pahatsoram-po. “Fa indro miaritra ny fijalian’ny olon-drehetra Izy, eny, ny fijalian’ny manan’aina tsirairay, na lehilahy na vehivavy na ankizy, izay isan’ny fianakavian’i Adama” (2